Ch 25 Matthew – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Matthew / Ch 25 Matthew
25:1 "Markaas, boqortooyada jannada waxay noqon doonaan sida toban gabdhood oo bikrado, kuwaas oo, laambadahoodii qaadashada, u soo baxay inay la kulmaan aroos iyo aroosadda.
25:2 Laakiin shan iyaga ka mid ah waxay ahaayeen doqonno, iyo shan ahaayeen doqonno.
25:3 Waayo, shan doqonnada ahaa, intay laambadahooda keenay, ma qaadataa saliidda iyaga la.
25:4 Oo weliba sida runta ah, kuwa miyir keenay saliidda, weelal ay, iyo laambadaheedii.
25:5 Tan iyo markii arooska ahaa waa raagay, Dhammaantood way wada dhinteen, oo waxaa la hurda.
25:6 Laakiin dhexe ee habeenkii, qaylada ka soo baxay: Bal eeg, aroos la yimid. Tag ka hor. '
25:7 Markaasaa bikradihii oo dhammu wada kaceen oo laambadahoodii hagaajiyeen ay.
25:8 Laakiin kuwa nacas caqliga lahaa ku yidhaahdeen, 'Na siiya annaga ka Saliiddiinna, waayo, laambadahayagii waa la bakhtiyeen. '
25:9 Ninkii miyir lahu jawaabay oo wuxuu ku yidhi, 'Waaba intaasoo ay jiraan ma laga yaabaa in nagu filnaan waydaa annaga iyo idinka, waxaa u roon in loogu talagalay in aad tagto iibiya oo ka soo iibsada. '
25:10 Laakiin halka ay ku sii socotay inay u soo iibsadaan, aroos ah soo gaaray. Oo kuwa la diyaariyey galay isaga la arooska, albaabkiina waa la xidhay.
25:11 Oo weliba sida runta ah, dhamaadka aad, Hablahaygii bikradaha ahaa haray sidoo kale soo gaaray, oo wuxuu ku yidhi, Sayidow, Sayidow,, noo furo. '
25:12 Laakiin isagu wuxuu ku yidhi by jawaabay, Aamiin Waxaan idinku leeyahay,, Anigu kuma garanayo.'
25:13 Oo sidaas waa inaad feejignaadaan, maxaa yeelay, idinku ma ogidin maalinta ama saacadda.
25:14 Waayo, waa sidii nin baahinaya on a safar dheer, kuwaas oo isugu yeedhay addoommadiisii ​​oo iyaga alaabtiisu.
25:15 Oo si Mid wuxuu siiyey shan talanti, iyo laba kale, weli si kale wuxuu siiyey mid ka mid ah, mid kasta sidii tabartiisu u gaar ah. Oo isla markiiba, ayuu soo dhigay.
25:16 Markaasaa kii shantii talanti helay ayaa u soo baxay, oo wuxuu kaloo sameeyey isticmaalka kuwan, oo wuxuu faa'iiday shan kale.
25:17 Waa saasoo kale, kii helay laba helayna, laba kale.
25:18 Laakiin kii helay mid ka mid ah, bixiddaada, qoday dhulka galay, oo wuxuu ku qariyey lacag ah oo sayidkiisu.
25:19 Oo weliba sida runta ah, Wakhti dheer dabadeed, sayidkii addoommadaas, kuwa soo laabtay oo uu xisaab la.
25:20 Oo markii kii shantii talanti helay ayaa soo dhawaaday, wuxuu keenay shan talanti oo kale, oo wuxuu ku yidhi: Sayidow, aad ii soo dhiibay shan talanti. Bal eeg, Aniga ayaa saas ku kordhay shan kale. '
25:21 Sayidkiisii ​​ayaa ku yidhi: Si wanaagsan baad yeeshay, addoon yahow wanaagsan oo aaminka. Tan iyo markii aad aamin Wax yar, Anaa kuu samayn doona wax badan. Gala farxadda sayidkaygiiyow. '
25:22 Markaasaa kii labadii talanti helayna waa sidoo kale soo dhawaaday, oo isna wuxuu yidhi: Sayidow, aad ii soo dhiibay labadii talanti. Bal eeg, Ayaan ka faa'iiday laba kale. '
25:23 Sayidkiisii ​​ayaa ku yidhi: Si wanaagsan baad yeeshay, addoon yahow wanaagsan oo aaminka. Tan iyo markii aad aamin Wax yar, Anaa kuu samayn doona wax badan. Gala farxadda sayidkaygiiyow. '
25:24 Markaasaa kii helay mid ka mid tayo, dhowaanin, sheegay: Sayidow, Waxaan og nahay inaad tahay nin qalbi engegan. Waxaad wax ka gurto meel aad aan waxba lagu beerin, oo ka urursado meel aanad wax ku firdhin.
25:25 Oo sidaas daraaddeed, iyagoo baqaya, Waxaan u soo baxay qariyey talantigaagii dhulka ku. Bal eeg, aad leedahay waa maxay idinkaa. "
25:26 Laakiinse waxaa isaga ka Sayidkiisii ​​ayaa ku yidhi in jawaab: 'Waxaad anoo addoonkiisa ah shar iyo caajis! Waad ogayd inaan wax ka gurto meel aanan wax ku beeray, oo ka urursado meel aanan wax ku firdhin.
25:27 Sidaa darteed, waa in aad ku shubo lacagtaydii baangiga, ka dibna, at my yimid, ugu yaraan waxaan ka helay lahaa waxa anigaa iska leh dulsaar.
25:28 Oo sidaas daraaddeed, qaadan talantigii ka qaada oo u dhiiba kan tobanka talanti haya leeyahay.
25:29 Waayo, mid walba waxa uu leeyahay, dheeraad ah oo la siin doonaa, oo uu yeelan doono faro badan. Laakiin kan ka ma leedahay, xitaa waxa uu u muuqataa in ay leeyihiin, waa laga qaadi doonaa.
25:30 Oo addoonka aan waxtar lahayn oo gudcurka dibadda ah ku tuura, halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilko jirriqsi. '
25:33 And he shall station the sheep, dhab ahaan, midigtiisa, but the goats on his left.
25:34 Then the King shall say to those who will be on his right: Kaalay, you blessed of my Father. Possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
25:37 Then the just will answer him, oo wuxuu ku yidhi: Sayidow, when have we see you hungry, and fed you; thirsty, and given you drink?
25:40 Oo jawaab, the King shall say to them, Aamiin Waxaan idinku leeyahay,, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me.’
25:44 Then they will also answer him, oo wuxuu ku yidhi: Sayidow, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?'
25:45 Then he shall respond to them by saying: Aamiin Waxaan idinku leeyahay,, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me.’